မင်းကွန်း | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ်→Categories မန္တလေး→မင်းကွန်း	123 >>
Category Archives: မင်းကွန်း
The Mingun Bell is located about 100m North up the street from the huge Mingun Pathodawgyi. သင်ကလမ်းတစ်လျှောက်ကသင်၏လက်ဝဲဘက်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းနည်းစေတီတော်ပေါ်အများအပြားအသေးစားစားသောက်ဆိုင်နှင့် souvenier စျေးဆိုင်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်. If you havea… Continue reading →
Posted in, မင်းကွန်း
အဆိုပါ Hsinbyume စေတီတော် (ထို့အပြင် Sat Taw Yar စေတီတော်သို့မဟုတ် Myatheindan စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်), မင်းကွန်းရွာအတွက်ခရီးသွားဧည့်ချွတ်၏မြောက်ပိုင်းအဆုံးမှာကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်ကနေလမ်းပေါ်တက်မြောက်အချို့ 150m ဆက်လက်ဆောင်ရွက်. You … Continue reading →
မင်းကွန်းကမ်းခြေမှာသင့်ကူးတို့စီးကနေစတင်သင်ပထမဦးဆုံးမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်ရပါလိမ့်မယ်, ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည် 5,000K. After you get your ticket the first place to stop is at Pon Daw Pagoda. Pon … Continue reading →